Dadkii ku barokacay abaaraha oo markale ka qaxay fatahaadaha Soomaaliya - BBC News Somali
Dadkii ku barokacay abaaraha oo markale ka qaxay fatahaadaha Soomaaliya
Image caption Hey'adaha gargaarka oo ka deyrinaya saameynta fatahaadaha
Warbixin ay soo saartay hey'adda badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa lagu sheegay in qoysaskii horay ugu barakacay abaarihii ku dhuftay Soomaaliya ay markale dib ugu barakaceen fatahaado ku dhuftay deegaanadii ay deganayeen.
Daadadka ayaa boqol toddobaatan iyo shan kun oo qoys ku qasbay inay ka barakacaan guryihii ay deganayeen, taasi oo hey'adaha gargaarka ay shegeen inay ka dhigantahay in dadkaasi ay u nugul yihiin cuduro ay kamid yihiin shuban biyood, daacuun iyo nafaqo daro.
Xaaladda bani'adanimo oo markii hore aad u liidatay ayay sheegeen in fatahaaduhu ay uga sii dareen, waxaana hey'adaha gargaarka ee ka howgala Soomaaliya ay sheegayaan in ku dhawaad shan milyan iyo shan boqol oo kun oo qof ay u baahanyihiin gargaar, halka ku dhawaad saddex milyan oo kamid ah dadkaasi ay u baahanyihiin gurmad degdeg ah oo lagu badbaadinayo nafsadooda.
Save the Children waxaa kale oo ay sheegtay inay kala shaqeeneyso kooxaha gurmadka deg dega sidii loogu gurman lahaa dadka ay waxyeelada ka soo gaartay fatahaada wabiga Shabeele ee magaalada Beledweyne.
Lix qof oo daadad ay ku dileen Talyaaniga
New Zealand: magaalo dhan oo la daadgureeyay
Waare "In ka badan 80% dadkii waxay ku sugan bannaanka Baladweyne"
Daadad khasaaro naf iyo maalba leh gaarsiiyay Jigjiga.
Jalafay Isaq oo ah sarkaal katirsan hey'adda Save the children waxaa uu intaa ku daray in xaaladu ay ka sii dartay, kadib markii roobab horleh ay xalay ka da'een deegaanadaasi.
Dad gaaraya 122,580 qof ayaa ka barakacay guryahooda, waxaana halkii ay deganayeen gebi ahaanba burburiyay daadadka.
" Habeenkii oo dhan waxaad maqleysaa oohin, iyadoona qoysaska ay dalbanayaan in loo soo gurmado, Dadka iyo caruurtooda ba waxaa ay ku xanibanyihiin guryaha, gaar ahaan saqafka sare ee guriga iyagoo ka cabsi qaba in biyaha ay qadaan caruurta xiliyada habeenki'' waxaa sidaasi yiri Jalafay oo katirsan Save the children.
Jalafay Isak waxaa uu sheegaya in dedaalka iminka la sameeyay aanu aheyn mid dabooli kara baahida jirta, oo loo baahanyahay in hey'adaha kale, dowladda ay wada shaqeyaan si loo badbaadiyo dad badan, loogana hortaago musiibooyinka noocani oo kale ah.
Hey'addu waxaa kale oo ay soo jeedisay in loo baahanyahay doomo macmal ah, si loo gaaro dadka ku xayiran meelaha go'doonka, kwaasi oo ay shegeen inay u baahanyihiin biyo, raashin, adeeg caafimaad iyo waxyaaba badan oo asaasi ah.
Saameynta daadadkan ayaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay inay u badantahay inay sii jiri doonto dhowr toddobaad.
Dalaga Ku dhawaad laba kun oo beero ah oo ku teedsan webiga Juba iyo qalab kale oo ay matooro kamid yihiin ayay biyuhu baabi'yeen, waxaana beeraleyd qaar ay waayeen dalag markaasi un diyaar ahaa oo ay doonayeen inay soo goyaan.